​वैदेशिक रोजगार र मनोसामाजिक समस्या
Thu, Apr 19, 2018 | 23:27:41 NST
13:31 PM (1 year ago)
नागेन्द्र यादव क्षेत्री/खोटाङ
श्रीमान विदेशबाट फर्किएपछि सुखका दिन बिताउँला, सुखदुःखमा सँगै रमाउँला भन्ने सपना थियो दीलकुमारी (नाम परिवर्तन) को । तर श्रीमानको आएपछि सोचे जस्तो भएन । सपना सपनै रह्यो । विपनामा कहिले काहीँ श्रीमानको पिटाई, दिनहुँ सासु र आमाजुको घरको गनगन खानु उनको लागि दिनचर्या बन्यो । उनी मलाई मात्र किन दैव लागेको होला ? भन्ने सोच्थिन् । मेरो आफन्त कोही पनि छैनन् । म केही पनि गर्न सक्दिन । अब मैले बाँच्नु बेकार छ यस्तै यस्तै कुरा मनमा खेलिरहन्थ्यो । गएको पुसमा सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा भेटिएकी दीलकुमारीले नडराइ नधकाइ आफ्ना कुरा भन्नुभयो । आजको यो दिन देख्न पाउछु जस्तो लाग्दैन थियो । तर अहिले नयाँ जीवन पाएको छु । केही गर्छु भन्ने आँट जागेको छ । म किन निरास हुने ? आफैलाई घाटा हुने काम रहेछ । चिन्ताले मलाई नै घाटा गरिरहेको छ । यो कुरा बुझ्न मलाई यहाँको मनोसामाजिक परामर्शकर्ता भाइबहिनीले सहयोग गर्नुभयो ।
यस्तै खार्मीकी यशोदा (नाम परिवर्तन) र माक्पाकी आशा (नाम परिवर्तन) उनीहरु दुवै जना छारे रोगबाट पीडित थिए । दुवै जनाका दाजु बहिनीको उपचार र घर परिवारको खर्च जुटाउन विदेश गए । विदेशबाट पठाएको पैसाले झारफुक र सामान्य उपचार गरे तर समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । माक्पाकी आशा एकातिर शारीरिक रुपमा अशक्त थिइन अनि उहाँको बोली पनि आउँदैन । ६० वर्ष नाघिसकेकी आशाकी आमालाई म भइन्जेल त स्याहार गरौंला म मरेपछि छोरीलाई कसैले स्याहार गर्दैन भन्दै मनमा अनेक कुरा खेलिरहन्थ्यो । तर सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) मार्फत निःशुल्क मनोपरामर्शसँगै औषधि सेवन गरेपछि अहिले समस्या केही कम भएको छ । परियोजनाका गतिविधी अनुगमन गर्ने क्रममा आशाकी आमाले तपाईं मनोपरामर्शकर्ताहरु हाम्रो भावी बनेर आउनुभयो भन्नुहुन्छ ।
खोटाङ्गमा स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेशन नेपालसँगको साझेदारीमा ७ महिनाअघि जनसेवा समाज नेपाल र अहिले नवकिरण सेवा समाज नेपालद्वारा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) ले गएको ३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारका कारण उत्पन्न मनोसामाजिक समस्याहरुमा परामर्श सेवा दिँदै आएको छ । मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सरिता राजभण्डारीका अनुसार यस अवधीमा ४४ जना पुरुष र १ सय ५७ महिला गरी १ सय ९१ जना मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श दिइएको छ । ती मध्ये ७९ प्रतिशत मानिसहरु सामान्य अवस्थामा जीवन बिताइरहेको छन् ।
राजभण्डारीका अनुसार धेरै यस्ता घटनाहरु बढ्नुमा घरेलु हिंसा, गन्तव्य देशमा आफन्तको मृत्यु, लाञ्छना, आरोप, वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति सम्पर्क बिहीन हुनु, ऋणको बोझ, कामको वोझ, श्रीमान वा श्रीमतीद्वारा दोस्रो विवाह गर्नु, आफन्त गन्तव्य देशको जेलमा पर्नु र फर्केर आउने व्यक्तिहरुमा निरासा तथा मानसिक समस्या देखा पर्नु रहेको छ ।
के हो मनोसामाजिक परामर्श ?
मनोसामाजिक परामर्श भन्नाले व्यक्तिको मनमा आफ्नो वा समाजका विभिन्न कारणले गर्दा उत्पन्न हुने अप्ठ्यारो अवस्था सहनलाई सहज बनाउने क्रियाकलाप, सम्बन्ध वा सामाजको सहयोगलाई बुझिन्छ । यसले व्यक्तिको मनको पीडा वा विक्षिप्ततालाई कम गर्न सहयोग गर्दै बिस्तारै आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन मदत गर्दछ । मनोसामाजीक सहयोगले व्यक्तिलाई विभिन्न परिस्थितीमा सहज महसुस गर्दै जीवन अघि बढाउन सहयोग गर्दछ ।
कुनैपनि व्यक्तिको मनले आफैंसँग र समाजसँग निरन्तर रुपमा अन्तरक्रिया गरिरहेको हुन्छ । व्यक्तिको संवेग, भावना र सोचाईमा पनि यो अन्तर्क्रियाले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अरु व्यक्ति, परिवार, साथीभाइ तथा समाजको विभिन्न परिस्थितिसँगको अन्तर्क्रियाका आधारमा हाम्रो मनमा खुसी, दुःखी, उत्साह, रिस, डर जस्ता अनुभूति भइरहन्छ । व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्ध,आर्थिक वा भौतिक पक्षले पनि मनमा निरन्तर प्रभाव परिरहेको हुन्छ । व्यक्ति खुशी हुँदा उसको मनमा पर्ने प्रभाव फरक हुन्छ भने दुःखी हुँदा त्यही अनुसारको प्रभाव पर्दछ । निरन्तर डर, पीडा, चिन्ता र निराशाले आफ्नो जिन्दगीलाई अर्थहिन मात्र होइन आत्महत्याको चरणसम्म पुर्‍याउन पनि सक्छ ।
(नागेन्द्र यादव क्षेत्री नवकिरण सेवा समाज, नेपाल दुर्खिमद्वार सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सुचना तथा परामर्श केन्द्रका मनोसामाजिक परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ ।)